Install Windows7in 10 minutes
Once the installation starts to expand the Windows files, hit SHIFT + F10. This will bring the command prompt window. Type in taskmgr to load task manager.
Once the Task Manager is loaded go to Process Tab. ﻿Right click on setup.exe set priority to High or Realtime. That’s it. This will emphasize the installation job. Optionally you can also assign the CPUs by going to Set Affinity.
This however doesn’t significantly affect the installation process. Until and unless you use some Solid State Drives or USB Flash drive asasource of Windows7installation files.
Posted by P Kyaw Swa at 12:48 PM
INSTALLING Windows XP IN 10 MINUTES!
STEP1 : After the Copy Part is Over ... System is Rebooted as we all know In general Foramatting Procedure...
Now After Reboot The Below Image Will Appear....
STEP 2: Now As This Image APPEARS You Have to Press "Shift + F10 " . This Will Open The command Prompt... Now type taskmgr in it. This will open the Task manager .
STEP3: After The task Manager Opens Goto Processes ... And Find "Setup.exe" process and Right CLICK on It.... and set the Priority to Highest....
STEP 4: Now Just Watch the Set It will take around9minutes and2minutes for Tolerance(depends System to system)....
Thats the Overall Tutorial...Hope You all Have LIKED IT...
So When you Format your PC Next Time It will Really Save Your TIME i.e around 20 to 25 minutes...
Posted by P Kyaw Swa at 12:46 PM
Root လုပ်တာဆိုတာ ဘာလဲ …? ဘာကြောင့် Android ကို root လုပ်ရတာလဲ…..?
Source: Myanmar Mobile Application Store
Source :http://androidflip.com and http://vinner.hubpages.com
ဒီအကြောင်းအရာတွေက Android ပေါ်မှာ root လုပ်လိုက်လို့ ရတာတဲ့ အစုလိုက်ထဲက အကျိုးအမြတ်တစ်ခုကို ရှာဖွေ ရှင်းပြပေးမှာပါ။
ပြီးတော့ Android Phone တစ်လုံးကို root လုပ်လိုက်လို့ ဘယ်ဟာတွေက အရေးကြီးပိုင်းမှာ
အသုံးဝင်တာတွေ၊ တိုးတက်ပြန့်ပွားလာတဲ့ အခြေခံ user တွေအတွက် root လုပ်လိုက်လို့
အခြေခံသဘာ သဘာဝတွေ၊ တချို့ ရိုးရှင်းတဲ့ applications တွေကိုလဲ အသုံးပြုဖို့ ၊
ပြီးတော့ android phones တွေကို root လုပ်ပြီး appllications တွေကို
အလွန်အမင်း လုပ်တာတွေ အတွက် ကျွန်တော်က ထည့်သွင်း စဉ်းစားဆုံးဖြတ်ပေးထားပါတယ်။
Posted by P Kyaw Swa at 12:40 PM
Android OS ကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာသုံးကြရအောင် (how to install Android OS on PC/Laptop)
ဖုန်းတွေထဲက Android OS ကို ကွန်ပျူတာပေါ်မှာသုံးချင်ပါတယ်လို့ Site ထဲက Mobile User တစ်ချို့က မေးမြန်းလာတာတွေရှိတာနဲ့ Android OS ကိုကွန်ပျူတာပေါ်
မှာသုံးတဲ့နည်းကို မြန်မာ Mobile App မှတင်ဆက်လိုက်ပါတယ်။ Android OS ကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာသုံးဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ tools တွေကိုအရင် download ရယူထားပါ။
VMware Player အားရယူရန်
Android OS 1.6 (x64)အားရယူရန်
နှစ်ခုစလုံးကို download လုပ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ VMware Player ကို ကွန်ပျူတာထဲမှာ install လုပ်လိုက်ပါ။ download လုပ်ထားတဲ့ Android OS ဖိုင်ကိုတော့ Desktop မှာခဏသိမ်းထားပါ။ ပြီးရင်ခုနတုန်းက ကွန်ပျူတာထဲမှာ Install လုပ်ထားတဲ့ VMware Player ကို Run လိုက်ပါ။ ပြီးရင် CreateaNew Virtual Machine ကို နှိပ်ပါ။ အောက်ပါအတိုင်းပါ။
Installer disc image file(iso) ကိုရွေးပါ။ပြီးရင် Browse ကိုနှိပ်ပါ။
Posted by P Kyaw Swa at 12:38 PM
ဒီပို့လေးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်က ကျနော်ကိုယ်တိုင် myanmaritpro မှာရေးသားခဲ့တဲ့ Post အဟောင်းလေးပါ။ တစ်ချို့ လိုအပ်တဲ့ဆိုလို့ပြန်တင်ပေးလိုက်ပါတယ်.....
4 GB flash driveØ
Windows7DVD (Any version as you like)Ø
Diskpart.exe utility Ø (download DiskPart here)
ဒါတှပွေညျ့စုံရငျတော့ စတငျ Install လုပျဖို့flash drive ကိုပွငျဆငျရပါမယျ။
StartØ > Run မှာ diskpart လို့ ရိုကျပါ။
ထို့နောကျ Flash Drive ကို စဈဖို့Ø list disk လို့ရိုကျပါ။
Ø select disk 1 ရိုကျပါ။
Ø clean ရိုကျပါ။
Ø create partition primary ရိုကျပါ။
Ø active ရိုကျပါ။
Ø format fs=fat32 quick ရိုကျပါ။
Ø assign ရိုကျပါ။
နောကျဆုံးအဆငျ့အနနေဲ့Windows7installation DVD မှ file အားလုံးကို အဆငျသငျ့ဖွဈသော USB Flash Drive ထဲသို့Ø
အားလုံးပွီသှားရငျတော့ Bootable USB Flash Drive ဖွဈသှားပါပွီ။
မိမိ တငျခငျြသော Computer ရဲ့ First boot မှာ USB drive ကိုရှေးပွီး Windows Installation အပိုငျးကို ဆကျလကျလုပျဆောငျနိုငျပါပွီ။
Posted by P Kyaw Swa at 8:37 AM
How to display the "run" on the Start menu in Windows 7
This is my next tips and tricks for windows7user. To access or running some feature in windows 7, we can use "run" feature to launch the program. For example we want to running "msconfig" feature, we can run it from "run" by typing "msconfig" in run menu. In default setting windows 7, "run" menu not show in windows7start menu.
The following are simple step to show "run" menu in windows7start menu:
Right click on windows7icon on left bottom of desktop
On "Start Menu" tab click "Customize"
Scroll down cursor and find "Run command"
Tick "Run command"
Click "OK" on the right bottom
Click "OK" on the "Taskbar and Start Menu Properties"
Now to access "run" menu, click windows7start menu, find "run" and click it
I hope this tips and tricks can help us to optimizing our windows 7
Posted by P Kyaw Swa at 11:31 PM
DDOS attack လုပ်ခြင်ရင်သတိထား
DDOS attack လုပ်တာက အခုခေတ်စားသလို လုပ်ရတာလဲ လွယ်ကူပြီး ချက်ချင်းကို လက်တွေ့မြင်ရ
တဲ့အတွက်ကြောင့် လိုက်လုပ်ခြင်တဲ့လူတွေများလာကြမှာပေါ့.. ဒါနဲ့ ကျွန်တော်လဲ တခါစမ်းပါသေးတယ်.
လုပ်တွေ့ကိုဘဲ မြင်ရတယ်။ ဘာမှခက်ခက်ခဲခဲလုပ်စရာ မလိုဘူး Software တခုကို Download လုပ်ပြီး
attack နှိပ်လိုက်ပြီးတာနဲ့ ထိုင်ပြီး စောင့်နေလိုက် ခဏနေတာနဲ့ ကိုယ် attack လုပ်တဲ့ website ကို
ပြန်ဖွင့်ကြည့်လိုက်ပါ ချက်ချင်းကို ဒီ website down သွားတာကို တွေ့ရမှာပါ။ လုပ်ရင်တော့ လုပ်ခြင်စရာ
ကြီးပါ ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် တခုပြောခြင်ပါသေးတယ် ဒီ DDOS attack က ဥပဒေနဲ့ မကင်းဘူးဆိုတာကို
လဲ သတိထားမိစေခြင်ပါတယ် အထူးသဖြင့် US မှာနေတဲ့ မိတ်ဆွေတွေ Connection ကောင်းတယ်ဆိုပြီး
DDOS နဲ့ လိုက်ပြီး website တွေကို တိုက်လို့ Trace လုပ်မိပြီး အဖမ်းခံရလို့ကတော့ US ရဲ့ ဥပဒေအရ
ထောင် ၁၀ နှစ်အများဆုံး ချလို့ရပါတယ် ပြီးတော့ US နိုင်ငံတခုထဲ မဟုတ်ဘဲ အခြားနိုင်ငံတွေမှာလဲ ထိုနည်းတူ ဥပဒေတွေ ရှိပါတယ်
ကိုယ်ကတော့ ပညာရခြင်လို့ လိုက်ကလိတယ် ဘာမှတော့ ရည်ရွယ်ချက်မရှိဘူး ဒါပေမဲ့လဲ ဒီ လုပ်လိုက်ခြင်း
က ကိုယ့်ကိုပြန် အန္တရာယ် ပေးနိုင်တာဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် နိုင်ငံရပ်ခြားမှာက ကိုယ်ပိုင် internet
connection ယူတဲ့အခါမှာ ပိုပြီးအန္တရာယ်ရှိပါတယ် ကိုယ့်ရဲ့ လုပ်ဆောင်ချက် အားလုံးကို ISP ကနေ
ဒါကြောင့် လေ့လာတဲ့ နေရာမှလဲ သတိထားပြီး ကောင်းတာလေးတွေကို လေ့လာရင် ပိုကောင်းပါတယ်
Posted by P Kyaw Swa at 8:49 PM
ကျနော်အနေဖြင့် လောလောဆယ် Ubuntu Myanmar လမ်းညွှန် ဆိုဒ်ကို ရေးသားနေပါ၍ လက်ရှိ ဘလော့အား Post များကို အ၇င်လို စိပ်စိပ်မတင်ပေးနိုင်သေးတာကို ခွင့်လွှတ်စေချင်ပါတယ် ခင်ဗျား။ ဒီဘလော့ မှာ လဲ ၃ ရက် တစ်ခါလောက်တော့ Post တွေကို တင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါကြောင်း အသိပေးမေတ္တာရပ်ခံအပ်ပါသည်ခင်ဗျား။
Ubuntu Myanmar လမ်းညွှန်း ဆိုဒ်ကို လာပြီး လေ့လာမယ်ဆိုရင် တော့ ...............
www.bt4mm.blogspot.com မှာလဲဝင်ရောက်လေ့လာနိုင်ပါတယ်ခင်ဗျား...နောက်ပိုင်းမှာ Backtrack ဆိုဒ်အား လင့်ပြောင်းချိတ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားပါတယ်...စီစဉ်နေပြီဖြစ်ကြောင်းလဲ အသိပေးပါရစေ...
Posted by P Kyaw Swa at 10:02 AM
Features in Appnimi All-In-One Password Unlocker
Multi Session Password Recovery Support
Now pause your recovery and save the configuration inadata file. Load this data file to resume the recovery even after restarting the machine. It will continue recovery from where it left earlier.
Save and Load the configurations so that you dont have to re-enter again and again
Posted by P Kyaw Swa at 9:48 AM
Root လုပ်တာဆိုတာ ဘာလဲ …? ဘာကြောင့် Android ကို roo...
Android OS ကိုကွန်ပျူတာပေါ်မှာသုံးကြရအောင် (how to ...
How to display the "run" on the Start menu in Wind...
De visita por el Paseo de la Castellana de Madrid
မြန်မာ-အင်္ဂလိပ် အဘိဓါန်လို အပ်သူများအတွက်
ညီနေမင်း (နည်းပညာ): computer service သမားများအတွက် Pc Mechanic (မြန်မာ...
ညီနေမင်း (နည်းပညာ): laptop ပြုပြင်နည်းနှင့်သိသင့်စရာများ (မြန်မာလို)